छोरीको बिहे नहुने डरले पढाई रोक्न बाध्य | Tungoon
छोरीको बिहे नहुने डरले पढाई रोक्न बाध्य
काठमाडौं । ‘मेरी छोरी स्कुल जाँदा वरिपरिका सबै छक्क पर्थे,’ झापा कचनकवल–६ की गुलेरुन बेगम सम्झिन्छिन्, ‘अचम्म मानेर सबैले घुम्टोभित्रैबाट जिब्रो टोक्थे।’ त्यो समय अब परिवर्तन भइसकेको उनको बुझाइ छ। ‘छोरीलाई पढाउनै हुँदैन भनिन्थ्यो। अब त छोराहरूभन्दा छोरीहरू बढी पढ्न थालिसकेका छन्,’ उनी भन्छिन्।
गुलेरुनकी छोरीले १२ कक्षा पास गरिसकिन्। अब उनी छोरीको पढाइ यहीं रोकिदिन चाहन्छिन्। किनभने उनलाई छोरीको बिहे नहुने चिन्ता छ। ‘मेरी छोरीले धेरै पढेकैले २१ वर्ष पुग्दा पनि बिहे हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘१२ सम्म पढाउँदा त यस्तो छ। अझ बढी पढाउने हो भने के होला ’
Previousमन्त्रीहरु हेरफेरको तयारी, कुन कुन मन्त्रीको पद धरापमा ?
Nextसुन तस्कर भूसाल र जग्गा कारोबारी कार्कीको कनेक्सन खोज्दै प्रहरी
मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम पेटी ठेकेदारलाई ?
आज सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सकिँदै
पाख्रीबास नगरपालिकामा ५४ करोडको लगानीमा ऐतिहासिक औद्योगिक ग्रामको सिलान्यास